I-Telbee: Thatha imiyalezo yelizwi evela kubaphulaphuli bakho bePodcast | Martech Zone
I-Telbee: Thatha imiyalezo yelizwi evela kubaphulaphuli bakho bePodcast
NgoLwesibini, Novemba 23, 2021 NgoLwesibini, Novemba 23, 2021 Douglas Karr
Kubekho iipodcasts ezimbalwa apho bendinqwenela ngokunyanisekileyo ukuba bendikhe ndathetha nondwendwe kwangethuba ukuze ndiqinisekise ukuba bebethetha kwaye besonwabisa. Kufuna umsebenzi omninzi kakhulu ukucwangcisa, ukucwangcisa, ukurekhoda, ukuhlela, ukupapasha, kunye nokukhuthaza ipodcast nganye. Idla ngokuba yilonto ndisemva ndedwa.
Martech Zone yipropathi yam engundoqo endiyigcinayo, kodwa Martech Zone udliwanondlebes iyandinceda ukuba ndiqhubeke nokusebenza kwindlela endithetha ngayo esidlangalaleni, indinceda ukuba ndinxibelelane nabaphembeleli kunye nabantu endibahloniphayo kumzi mveliso wam, kwaye yondla inxenye yabaphulaphuli bam abayixabisayo iaudio phezu kwesicatshulwa… into ekungekho shishini lifanele ukuyijongela phantsi.
Umyalezo welizwi weTelbee
I-Telbee liqonga lemiyalezo yelizwi onokuthi ulisebenzise ukubamba imiyalezo yelizwi kwiindwendwe ezizayo okanye abaphulaphuli bepodcast yakho. Iqonga lineenketho ezimbalwa ezahlukeneyo… ukukwazi ukwakha iphepha lendawo onokuthi ubelane ngalo, iwijethi onokuthi uyishumeke kulo naliphi na iphepha, okanye iqhosha lentetho onokuthi ulifake kuyo nayiphi na indawo ngescript.
Ndiseta i-popup yomyalezo welizwi Martech Zone Udliwano-ndlebe kwimizuzu embalwa usebenzisa iqonga labo lasimahla. Inguqulelo ehlawulweyo ineempawu ezininzi ngakumbi zokwenza ngokwezifiso, kodwa bendicinga ukuba ndiza kuyivavanya. Ukuba ufunda oku nge-imeyile okanye nge-RSS, Cofa kwinqaku kwaye uya kukwazi ukuvavanya undishiyele umyalezo.
Ndithumele uMyalezo weLizwi
Iimeko zeTelbee zePodcasting
Nazi ezinye iimeko ezintle eziboniswe nguTelbee ukuze zisetyenziswe ngepodcasting:
Rekhoda umxholo womphulaphuli kwaye wenze iipodcasts zakho zisebenze -Mema amabali, imibuzo kunye neengcebiso kwaye uzirekhode nge-telbee. Funda i-URL yethu emfutshane ukutyelela, ukwabelana ngayo ngemidiya yoluntu kunye ne-imeyile, okanye ukongeza irekhoda yelizwi ngqo kwiwebhusayithi yakho. Ngezixhobo ezilula ukwenza, mamela kwaye uphendule - nanini na kufanelekile!
Mamela - okanye ufunde - ukufakwa kwaye ulawule kwi-inbox ezinikeleyo -Akusekho kuhluza ngee-imeyile, ukutya koluntu, ii-DM kunye neetekisi ezivela kubaphulaphuli bakho. Yenza ubomi bube lula! Fumana zonke ushicilelo lwakho kwibhokisi enye, ebhalwe ukuba uyathanda. Nika ufikelelo kubabuki zindwendwe bakho, abavelisi kunye neqela lonke ukuze wabelane kwaye ulawule. Dlala ngqo, phawula izinto ozithandayo, khuphela ukuze uhlele, okanye uphendule ngelizwi!
Khulisa abaphulaphuli bakho-Bandakanyeka kwimidiya yoluntu yonke kwaye ukhuthaze ukwabelana -Mema abalandeli bakho ukuba bafake isandla kwipodcast yakho ngalo naliphi na iqonga leendaba zosasazo, kwaye ubabonise ukuba abanye bafumana malini kuyo! Yiva umzuzu othi WOW xa uphendula-Abantu bayayithanda xa uphendula, kwaye ikhawuleza kakhulu kwaye ingumntu ngelizwi. Emva koko baya kufuna ukwabelana ngento oyenzayo kwaye bancede ukukhulisa uluntu lwakho.
Yonga ixesha kunye nokukhathazeka ekudaleni umxholo kunye nokuchwetheza -Ukucwangcisa, ukurekhoda udliwano-ndlebe kunye nokuvelisa iziqephu ngumsebenzi onzima. Ngoko ke endaweni yokuchwetheza nokuthetha – kulula kwaye kuyakhawuleza! Kwaye unciphise ixesha lokucwangcisa. Sebenzisa i-telbee ukunxibelelana ngelizwi neqela lakho kunye nabasebenzisana nabo. Kwaye ukuba ukhohliwe loo mbuzo, kufuneka uphinde uthabathe, awukwazi ukwenza iidayari zisebenze okanye ufuna nje ukwenza ubomi bomntu wonke bube lula, sebenzisa i-telbee ukurekhoda iindwendwe zakho! Ngezixhobo zobuchwephesha zokulayisha iaudio, ukhetho lwe-bitrate kunye nokwahlula isikrini ukwabelana ngemibuzo.
I-Telbee ikwaphuhlise iSikhokelo sePodcast Audio Engagement.
Isikhokelo kwiPodcast Audio Engagement Qalisa ngoku ngeTelbee
tags: odiyoingqokelela yomsindoizimvo zomsindoifomu yomsindoimiyalezo yesandiumyalezo ovakalayoiwijethi yomsindoumnxebailizwiingqokelela yelizwiizimvo zelizwiuhlobo lwelizwiimiyalezo yelizwiImiyalezo yelizwiUkurekhodwa kwelizwiiwijethi yelizwi
Inyanga: Yandisa iiNguqulelo ngokuThenga iQela kwiVenkile yakho yakwaShopify